I-Dos and Don'ts of Reflective 3D Photography - uLucidPix
I-Do's and Don'ts of Reflective 3D Photography
Ukuthwebula ukukhonjiswa kwesihloko emanzini kungenza isithombe esihle. Lapho iguqulwa ibe yisithombe se-3D, isithombe esikhanyayo siguqulwa sibe ukuguqulwa okumangalisayo, okubonisa isihloko sakho sobabili nokuzikhanya. Kungaba nzima ukuthola isithombe esifanele sokuthwebula isithombe esikhanyayo esiguqukayo kahle, ngakho-ke nazi ezinye izinto ongafanele uzenze ukukusiza uthathe isithombe sakho esifanelekile se-3D.
Do: Center Isihloko
Ukufaka isihloko sakho esifundeni esingaphezulu-maphakathi sohlaka lwakho kudala umphumela othokozelayo wokulinganisa nokubonakalayo. Izinto ezivumelanayo zingadala ibhalansi yobuhle besithombe sakho. Ukuguqula isithombe sakho esikhanyayo sibe yisithombe se-3D kuzosiza i-pop yakho yesihloko futhi kuhlanganyele abalandeli bakho.
Musa: Guqula ama-Curves noma Izinto eziyisiyingi
Iso lomuntu likhulu ukuqaphela imibuthano ephelele. Kuhle futhi ekuboneni imibuthano engalingani kangako. Ngoba ubuchopho bethu bukhetheke kakhulu futhi bufisa ukuphelela, kungaba nzima ukuguqula isithombe sakho esibonakalayo sibe isithombe se-3D uma isibonisi siqukethe into eyindilinga noma ijika yohlobo oluthile. Njengoba kuboniswe kwisibonelo esingezansi, i-arch yebhuloho iyahlanekezelwa ekuguqukeni. Yize lokhu kungenzeki njalo, futhi kungonakalisa umthelela we-3D, ungafuna ukugwema noma yimaphi ama-curve asibonisi ukuze usize ekuqinisekiseni ukuguqulwa okuhlanzekile kwe-3D.
Yenza: Photograph a Sunset
Akungatshazwa ukuthi imibala yelanga yenzela isithombe esihle, kepha le mibala ingasiza futhi kukhanyise isithombe esikhanyayo. Lapho isithombe esihle sokukhombisa ukushona kwelanga siguqulwa sibe isithombe se-3D, imibala iqala ukuphuma bobabili phezulu naphansi kohlaka, okudala isithombe esihle sokwenza ukukhanya kwelanga le-3D.
Musa: Khombisa Imigqa Emihle
Lapho uguqula isithombe sakho esijwayelekile se-2D sibe isithombe se-3D, kungaba nzima ukuthwebula imigqa emincane, ecocekile kwezinye izithombe. Njengamajika, lemigqa ingahlanekeleka kalula ngenkathi ihambisa isithombe bezungeza ukubuka umphumela we-3D. Ekuguqukeni kwe-3D, futhi kunzima ukuthola imininingwane yemigqa emihle. Njengoba kuboniswe esibonelweni esingezansi, ama-speaker ekubonisweni kwesondo lebhayisekili kunzima ukubonisa kahle, futhi angadabula noma agobe ezindaweni ezithile.
Funda ukuthi yiziphi izinto zesithombe eziguqula kahle isithombe se-3D ezingakhohlisa, kepha ngokuzijwayeza, ungaguqula ukuthwebula izithombe kwakho kukhuthaze izithombe ze-3D. Landa i-LucidPix manje bese uguqula isithombe sakho sokuthwebula ku-3D bese usabelana ngayo kugalari yeLucidPix ukukhombisa ukuguqulwa kwakho okumangazayo. Ungakhohlwa ukujoyina iqembu leLucidPix 3D Photos ku-Facebook ukuze abantu abaningi babone.
Izinto okufanele zenziwe eBay Area ngesikhathi seCovid-19 →← Amathiphu Wezithombe ze-3D - Ungazidubula Kanjani Izithombe Zika-3D ezihamba phambili